E-Journal: နှလုံးလှဖို့ အလှဆုံးသို့ (၂)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:55 PM
အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း အနုပညာပေါ့နော်။ အလှဆုံး…. အသုံးချလို့ နှလုံးလှဖို့ အဆုံးအမအချို့  ပါပဲ။ ညီလေးသို့ပေးစာများနဲ့တူညီစွာ လူမှုရေးရာ ကျင့်ဝတ်အဖြာဖြာကို ဦးတည်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ E-Jouranl အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ပါစေကြောင်း…..
E - Journal လာဖတ်သွားပါတယ်ရှင့်
ရဟန်း သာမဏေများ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရတဲ့ စည်းကမ်းလေး အသေးစိတ် ရှင်းပြရေးသား တာကို သေချာလေး ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ ဣနြေ္ဒ သိက္ခာ ပြည့်ဝနေတဲ့ ရဟန်းတော်ကို မြင်ယောင်ပြီး ကြည်နူးသဒ္ဓါ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာတော်များ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမယ့် သိက္ခာပုဒ်တွေက မလွယ်လှဘူး ထင်မိပါတယ်။ အကျဉ်း ၂၂၇ သွယ်၊ အကျယ် ကုဋေကိုးထောင်.. ဒီမျှ ရှိတယ်ဆိုတာ စတင်နာကြား သိရှိစဉ်က ကျနော် ဘုရား. တမိတယ်။ အပြစ် မရှိအောင်၊ အပြစ် မဖြစ်အောင် နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ ခက်တတ်တဲ့ သဘာဝကို ဆင်ခြင်မိတယ်။ အဓိက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်မနောကိုပေါ့။ တွေးမိတာလေး တစ်ခုပါ။ လေးစားလျက်..။